လူသတ်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ဓားပြတိုက်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ဓားပြအဖွဲ့၊ မူးယစ်ဘုရင်များကို စစ်ကောင်စီရဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတွေက မွေးစားထားတာလား?
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ပန်းတောပြင်ကျေးရွာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ ခန့်ရှိနေသည့်ကြားက ဓားပြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပန်းတောပြင်ရွာသားတစ်ဦး… By
Blog လူသတ်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ဓားပြတိုက်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ဓားပြအဖွဲ့၊ မူးယစ်ဘုရင်များကို စစ်ကောင်စီရဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတွေက မွေးစားထားတာလား?
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ပန်းတောပြင်ကျေးရွာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ ခန့်ရှိနေသည့်ကြားက ဓားပြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပန်းတောပြင်ရွာသားတစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံခဲ့ရသည်။ ပစ်ခတ်ခံရသူ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့သည့်အပြင် အခြားနှစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိခဲ့သည်
ဘူးသီးတောင် ။ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက်နေ့မှ စ၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကျောင်းများဖွင့်လှစ်မည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် ကျောင်းသား/သူများ အချို့ ကျောင်းအပ်နှံလျက်ရှိသည်။ အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဟု ကြေညာခဲ့သောကြောင့် မည်သည့်ကျောင်းမှ ကျောင်းဝင်ကြေး ကောက်ခံခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကျောင်းသားများကို ကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ ဗလာစာအုပ်၊ Face Shield, Mask စသည်များလည်း ပေးဝေလျက်ရှိသည်။ သို့သော် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ အတွင်းငှက်သေကျေးရွာအုပ်စု သိန်တောင်ကျေးရွာရှိ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
ဘူးသီးတောင် ။ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက်နေ့မှ စ၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကျောင်းများဖွင့်လှစ်မည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် ကျောင်းသား/သူများ အချို့ ကျောင်းအပ်နှံလျက်ရှိသည်။ အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဟု ကြေညာခဲ့သောကြောင့် မည်သည့်ကျောင်းမှ ကျောင်းဝင်ကြေး ကောက်ခံခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကျောင်းသားများကို ကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ ဗလာစာအုပ်၊ Face Shield, Mask စသည်များလည်း ပေးဝေလျက်ရှိသည်။ သို့သော် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ အတွင်းငှက်သေကျေးရွာအုပ်စု သိန်တောင်ကျေးရွာရှိ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ဦးရှည်ကျကျေးရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့က နယ်မြေ (၅) ငါးခူရကျေးရွာ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး လက်အောက်ခံစခန်း အမှတ် (၁၂) မှ မ.က.ဖ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ ဆွဲ၊ တင်၊ စစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ စစ်ဆေးခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စုများမှ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက Rohingya Today သို့ပြောသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများကို နယ်မြေရုံးသို့ ယူဆောင်သွားသည်ဟု… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ဦးရှည်ကျကျေးရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့က နယ်မြေ (၅) ငါးခူရကျေးရွာ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး လက်အောက်ခံစခန်း အမှတ် (၁၂) မှ မ.က.ဖ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ ဆွဲ၊ တင်၊ စစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ စစ်ဆေးခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စုများမှ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက Rohingya Today သို့ပြောသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများကို နယ်မြေရုံးသို့ ယူဆောင်သွားသည်ဟု…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အိုးအိမ်မဲ့သွားသူများကို အာဏာပိုင်များက နေအိမ်များဆောက်ပေးနေသော်လည်း မူလနေရာတွင်မဟုတ်ခြင်း၊ ပေးသည့်မြေကွက်နှင့်အိမ်များကျဉ်းလွန်းခြင်းများရှိနေသည်။ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သီဟိုဠ်သရက် (ဟိုက်ရ်ဖာရာ) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘကားဂုံးနားတောင်ရွာတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စ၍ ပေ ၃၀ x ပေ ၂၀ မြေကွက်များချ၍ ၂၁ ပေ x ၁၅ ပေ အိမ်များ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၁၈) အိမ် ဆောက်လုပ်နေသည်ဟု ဒေသခံများက Rohingya Today သို့ပြောသည်။ အိမ်များမှာ… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အိုးအိမ်မဲ့သွားသူများကို အာဏာပိုင်များက နေအိမ်များဆောက်ပေးနေသော်လည်း မူလနေရာတွင်မဟုတ်ခြင်း၊ ပေးသည့်မြေကွက်နှင့်အိမ်များကျဉ်းလွန်းခြင်းများရှိနေသည်။ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သီဟိုဠ်သရက် (ဟိုက်ရ်ဖာရာ) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘကားဂုံးနားတောင်ရွာတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စ၍ ပေ ၃၀ x ပေ ၂၀ မြေကွက်များချ၍ ၂၁ ပေ x ၁၅ ပေ အိမ်များ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၁၈) အိမ် ဆောက်လုပ်နေသည်ဟု ဒေသခံများက Rohingya Today သို့ပြောသည်။ အိမ်များမှာ…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်တွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း လူကုန်ကူးသူများက လူကုန်ကူးနေသည်များကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ လွှတ်နေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူကုန်ကူးမှုများကို အာဏာပိုင်များနှင့် လူကုန်ကူးသူများ ပူးပေါင်း၍ ကျူးလွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ဦးရှည်ကျကျေးရွာမှ ကူးတို့သမား ဦးဆော်လိမ် (ဘ) ဦးအာမတ်ကော်ဘိရ် (အသက် ၃၀ နှစ်) သည် တဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးငယ်များကို… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်တွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း လူကုန်ကူးသူများက လူကုန်ကူးနေသည်များကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ လွှတ်နေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူကုန်ကူးမှုများကို အာဏာပိုင်များနှင့် လူကုန်ကူးသူများ ပူးပေါင်း၍ ကျူးလွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ဦးရှည်ကျကျေးရွာမှ ကူးတို့သမား ဦးဆော်လိမ် (ဘ) ဦးအာမတ်ကော်ဘိရ် (အသက် ၃၀ နှစ်) သည် တဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးငယ်များကို…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မတောင်ရပ်ကွက်တွင် အမည်မသိသူနှစ်ဦးက ဗြောက်အိုးဖောက်၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးနောက် ရဲများရောက်ရှိလာပြီး ခရိုင်ရဲမှူးက မဆိုင်သူတစ်ဦးကို လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် မြို့မတောင်ရပ်ကွက်၊ မြို့မရဲစခန်း၏ အရှေ့ဘက်၊ မင်းဘာကြီးလမ်း၏ အနောက်ဘက်၊ ဒေါက်တာထွန်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ လမ်းသို့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် အမည်မသိလူနှစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး ဗြောက်အိုးများ ပစ်ချ၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ ဗြောက်အိုးပေါက်သံများ အသံအလွန်ကျယ်ခဲ့သောကြောင့်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မတောင်ရပ်ကွက်တွင် အမည်မသိသူနှစ်ဦးက ဗြောက်အိုးဖောက်၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးနောက် ရဲများရောက်ရှိလာပြီး ခရိုင်ရဲမှူးက မဆိုင်သူတစ်ဦးကို လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် မြို့မတောင်ရပ်ကွက်၊ မြို့မရဲစခန်း၏ အရှေ့ဘက်၊ မင်းဘာကြီးလမ်း၏ အနောက်ဘက်၊ ဒေါက်တာထွန်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ လမ်းသို့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် အမည်မသိလူနှစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး ဗြောက်အိုးများ ပစ်ချ၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ ဗြောက်အိုးပေါက်သံများ အသံအလွန်ကျယ်ခဲ့သောကြောင့်…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နေအိမ်မီးရှို့ခံရသူတစ်ဦးကို အစိုးရကနေရာချထားပေးသည့်နေရာတွင် မနေလိုကြောင်း စာတင်သဖြင့် ဖမ်းဆီး၍ အမှုဆင်ပြီး ထောင်ချရန် စီစဉ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ် အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်မှ NGO ဝန်ထမ်းဟောင်း ဦးကာဆိမ်း၏ နေအိမ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် စစ်တပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့် မိသားစုဝင်များသည် မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာ BAJ ရုံး၏ မြောက်ဘက်ရှိ ရွာတစ်ရွာတွင် ခိုလှုံနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါ ၎င်းနှင့် မိသားစုဝင်များကို အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နေအိမ်မီးရှို့ခံရသူတစ်ဦးကို အစိုးရကနေရာချထားပေးသည့်နေရာတွင် မနေလိုကြောင်း စာတင်သဖြင့် ဖမ်းဆီး၍ အမှုဆင်ပြီး ထောင်ချရန် စီစဉ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ် အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်မှ NGO ဝန်ထမ်းဟောင်း ဦးကာဆိမ်း၏ နေအိမ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် စစ်တပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့် မိသားစုဝင်များသည် မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာ BAJ ရုံး၏ မြောက်ဘက်ရှိ ရွာတစ်ရွာတွင် ခိုလှုံနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါ ၎င်းနှင့် မိသားစုဝင်များကို အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော…
စစ်တပ်၏ အာဏာလုယူမှုသည် ဒီမိုကရေစီကိုသာ ဖျက်စီးခြင်းမဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်မှုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လမ်းများပေါ်တွင် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် သွေးချင်းချင်းနီခဲ့ရပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်လကျော်က အာဏာသိမ်းခဲ့သော စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုသည် မတ်လ ၃ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ခွင့်ပြုသယောင် ဟန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ လူမဆန်သော ဖြိုခွင်းမှုတစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံတဝန်းတွင် အနည်းဆုံး ၃၈ဦး အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရသော်လည်း အမှန်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
စစ်တပ်၏ အာဏာလုယူမှုသည် ဒီမိုကရေစီကိုသာ ဖျက်စီးခြင်းမဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်မှုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လမ်းများပေါ်တွင် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် သွေးချင်းချင်းနီခဲ့ရပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်လကျော်က အာဏာသိမ်းခဲ့သော စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုသည် မတ်လ ၃ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ခွင့်ပြုသယောင် ဟန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ လူမဆန်သော ဖြိုခွင်းမှုတစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံတဝန်းတွင် အနည်းဆုံး ၃၈ဦး အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရသော်လည်း အမှန်…
လူသတ်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ဓားပြတိုက်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ဓားပြအဖွဲ့၊ မူးယစ်ဘုရင်များကို စစ်ကောင်စီရဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတွေက မွေးစားထားတာလား?	8 months ago
တရားမျှတမှု မပါသည့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည့် ရှင်းလင်းတင်ပြချက်	11 months ago
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့က တရုတ်နှင့် မြန်မာတို့ အွန်လိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (လျှို့ဝှက်)	1 year ago
တောျလှနျတကျကွှမှုဆိုတာ ဘာလဲ - မောငျဇာနညျ To fellow Burmese activists	1 year ago
အစိုးရရဲ့ အပြောနဲ့ အလုပ်က ထပ်တူကျသလား	1 year ago
ရခိုင်ပြည်၏ စည်းလုံးညီညွတ်သော မတူကွဲပြားသည့် အသိုင်းအဝန်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်	1 year ago
မြန်မာစစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို ခံနေကြရသည့် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်အတူ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူတကွ ရပ်တည်လျက်ရှိခြင်း	1 year ago